Shiinaha Harrow Disc Harrow Oo Loogu Tala Galay Warshada 1BQX iyo beeraleyda | RY AGRI
Taxanaha 1BQX Light-duty Disc Harrow waxay ku habboon yihiin xoqidda iyo furfurista xinjiraha ka dib marka la falo iyo qorshaynta dhulka ka hor inta aan lagu beerin dhulka la beeray. Mashiinnada ayaa ka dhigi kara carro iyo bacrimin isku dhafan, oo iska fogeeya jiridda dhirta ee ku taal carrada fudud ama dhexdhexaadka ah iyo diyaarinta sariir abuur si loo beero.
Taxanaha jir-Disc Harrow-ka wuxuu ka samaysan yahay tuubbo bir ah oo aqoon leh, Qaab-dhismeedkoodu waa mid fudud oo macquul ah, xoog leh oo raagaya, ku habboon in lagu shaqeeyo, fududahay in la dayactiro oo wax ku ool ah firidhida iyo dhexgalka ciidda oo ka tagto dhulka oo siman, xitaa caws. Kuwani waxay qancinayaan shuruudaha beeraha ee beerashada degdegga ah.
Joojinta taxanaha ah ee '1BQX' Burcad-badeedda Fudud ee Fudud-Disk Harrow hortiisa iyo gadaalba dhammaantood waxaa lagu soo ururiyey maqaar la duubay, waxaa loo isticmaali karaa laga bilaabo 12HP ilaa 70HP nooca cagaf-cagafta
Shaqaynta qoto dheer
Adeegso, hagaajin iyo dayactir
1. Xeerarka isticmaalka rake:
(1) Rake iyo wixii ku dhejinaya oo dhami waa inay noqdaan kuwo jilicsan.
(2) Markuu raku shaqeynayo, waa mamnuuc in dib loo gurto. Markuu raku rogrogo, waa in kor loo qaadaa.
2. Isku hagaajinta qoto dheer qaadista:
(1) Markaad hagaajineyso xaglaha leexashada kooxda, U-bolt-ka kooxda rake waa in marka hore la dabciyo. Qoto dheer qaadku wuu qoto dheer doonaa iyadoo la kordhinayo xagalka leexashada. Guud ahaan, xagalka leexashada ee kooxaha hore iyo gadaal gadaal waa inay isla xariiq isku mid ah ahaadaan. Kooxda raajada gadaal waa 3 ° ka weyn tahay kooxda kuleylka hore. Kadib hagaajinta xagasha ku habboon, U-boolku waa in la adkeeyo.
(2) Guud ahaan, daloolka hoose ee harrow waa la kordhin karaa.
3. Joogto iyo toosin toos ah oo rake ah.
(1) Dhibaatada waxaa lagu xalin karaa iyadoo la hagaajinayo dhererka isku xirnaanta cagafyada iyo usha jiida.
4. Ciribtirka jarista qeyb ahaan:
Xidhiidhka sare ee isku-xidhka cagaf-cagafta waa in la dheereeyaa, ama kooxaha hore iyo gadaal gadaal waa in loo dhaqaajiyaa dhinaca ka soo horjeedka masaafo isku mid ah isla waqtigaas, ama waa in la dhimo xagalka leexashada ee kooxda raajada hore.
5. Isku hagaajinta nadiifinta xoqida:
Nadiifinta udhaxeysa daabka xoqida iyo dusha sare ee daabku waa inuu ahaadaa 1 ~ 8 mm. Markaad ka shaqeyneyso dhulka leh biyo ballaaran ama haramaha, kan yar waa in loo qaadaa sida ugu macquulsan
Waqtiyada yar yar.
Hore: Harrow Disc culus oo loogu talagalay Beeraha 1BJ
Xiga: 3Z Karsato Wixii Loogu Tala Galay Cowska Soybean